မြန်မာ-အမေရိကန် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆွေးနွေး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မြန်မာ-အမေရိကန် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာ-အမေရိကန် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်တွေအကြား အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ အခြေအနေတွေ၊ ဘင်္ဂါလီတွေ တစ်ဖက်နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးမှု အကြောင်းအရင်းမှန်တွေ၊ ဥပဒေနဲ့အညီ ပြန်လည် လက်ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေ မျှတမှုရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေအပါအ၀င် အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ မြန်မာ့တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မွနျမာ-အမရေိကနျ အကွမျးဖကျမှု တားဆီးကာကှယျဖို့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေး ဆှေးနှေး
မွနျမာ-အမရေိကနျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောတှအေကွား အကွမျးဖကျမှုတားဆီးကာကှယျဖို့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေး အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
မွနျမာ့တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက မွနျမာနိုငျငံကိုရောကျရှိနတေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Hon. Rex Tillerson ကို နိုဝငျဘာလ ၁၅ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျမှာ လကျခံတှဆေုံ့စဉျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွတာပါ။
အဲ့ဒီတှဆေုံ့ပှဲမှာတော့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျမှုဖွဈစဉျရဲ့ အခွအေနတှေေ၊ ဘင်ျဂါလီတှေ တဈဖကျနိုငျငံကို ထှကျပွေးမှု အကွောငျးအရငျးမှနျတှေ၊ ဥပဒနေဲ့အညီ ပွနျလညျ လကျခံနိုငျရေးဆောငျရှကျမှုတှေ၊ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားတဲ့ အကူအညီတှေ မြှတမှုရှိဖို့ လိုအပျတဲ့ အခွအေနတှေအေပါအဝငျ အစိုးရနဲ့ တပျမတျော အပွညျ့အဝ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွတယျလို့ မွနျမာ့တပျမတျောက သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။
Previous articleကော့သောင်းမြို့ ဘုရင့်နောင် ကဇာတ်ရုံဟောင်းဝင်းထဲမှာ မီးလောင်
Next articleပုသိမ်မြို့မှာ ပန်းမြားဧရာ ကျောင်းပေါင်းစုံ ပန်းချီပြိုင်ပွဲပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)